Mini Calculator Khibhodi, Block vs Block uye mimwe yemahara mitambo uye maapps chete izvozvi | IPhone nhau
Mini Calculator Keyboard, Block vs Block uye mimwe mitambo yemahara uye maapps chete izvozvi
Kwakanaka sei! Isu tave kutobata kupera kwevhiki nezvigunwe zvedu. Ini handizive izvo imi varume zvamurikuronga kuita, kutiza? Tarisa mwaka wekupedzisira wewaunofarira akateedzana kamwechete? Kungozorora chete? Asi chero zvaunoita, mukati IPhone nhau isu tinokurudzira nhevedzano ye maapp mahara nemitambo saka unogona kunakidzwa pachako pakati spree uye spree.
Usakanganwa kuti zvese zvinopihwa iwe zvauchaona pazasi zvinoshanda Nguva Yakatemwa uye nekudaro, dzinogona kupera chero nguva. Dhawunirodha nekukurumidza sezvazvinogona kuti ubatsirwe nechipo, iwe uchava bvisa gare gare kana iwe pakupedzisira usingavade.
1 Mini Calculator Khibhodi
2 Vimbai Vimbai II
3 Mitambo yemucheche
Mini Calculator Khibhodi
Ini handizive kusvika pamwero wauri kuzonakidzwa neichi chishandiso, asi izvo zviri pachena kubatsira kwayo nekuti iri keyboard app iyo inowedzera Calculator kune ako keyboards nenzira yekuti, kana iwe uchinge uchitaura neshamwari dzako paWhatsApp, Meseji, Teregiramu nevamwe, haufanire kusiya iyo app kuti uverenge kuti mangani emumwe wenyu anotamba pakudya manheru manheru.
Mini Calculator Khibhodi Iine mutengo wenguva dzose we € 1,09 uye ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Mini Calculator Khibhodi - Pluskey1,09 €
Vimbai Vimbai II
Uye ikozvino hongu, isu tinoenderera mberi nemutambo, «Block vs Block II» iyo, sezvaunogona kufungidzira, iri block mutambo wakafanana chaizvo neakakurumbira Tetris asi nehukuru hwekuti iwe unogona kutarisana neshamwari munguva chaiyo, kunyangwe iwe ukashandisa isiri-iOS chishandiso, sekureba sekunge uri pasi peiyo imwecheteyo netiweki yeWiFi.
Block vs Block II ine mutengo wenguva dzose we € 3,49 uye ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Uye sezvo ini ndichiziva kuti vazhinji venyu mune vadiki kumba, takapedza nemutambo wakanyatsogadzirirwa izvi, uye kuti mugone kushandisa nguva yakawanda pamwe chete. Ndiwo «Mitambo yeVacheche», mutambo unotamba zvinosekesa beaver iwe aunofanirwa kubatsira kuchenesa mvura kuitira kuti vakwanise kuita zvavakavaka: bata hove, bvisa matombo, tema miti…. Mutambo uyu unofambidzana nemimhanzi inoshamisa yakanyanya kugadzirirwa vadiki vari mumba uye nekuwedzera, iyo app ndeyemahara yekutengesa uye ye-in-app kutenga, saka hapana njodzi.
"Mitambo Yevacheche" ine mutengo wenguva dzose we € 2,29 uye ikozvino unogona kuiwana yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Mini Calculator Keyboard, Block vs Block uye mimwe mitambo yemahara uye maapps chete izvozvi
Spotify inotidzorera kumashure nenguva nemumhanzi wataiteerera pataive nemakore makumi maviri
FCC inokurudzira Apple kuti ishandise iPhone FM machipisi kuponesa hupenyu